ညအိပ်ယာထဲအထိ အွန်လိုင်းသုံးရင် ဘယ်လောက် ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတာ ဖတ်​ဖြစ်အောင် ဖတ်​သွားကြပါ - TAWTHU
ညအိပ်ယာထဲအထိ အွန်လိုင်းသုံးရင် ဘယ်လောက် ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတာ ဖတ်​ဖြစ်အောင် ဖတ်​သွားကြပါ
by Taw Thu in ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ
ညအိပ်ယာထဲ အထိ အွန်လိုင်းသုံးရင် ဘယ်လောက် ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတာ ဖတ်​ ဖြစ်အောင် ဖတ်သွားကြပါ
ကျန်းမာရေးပါရဂူကြီးများရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ လူသားတွေအတွက် အကောင်းဆုံး အိပ်စက်အနားယူချိန်ဟာ ည ၁၁ နာရီမှ မနက် ၃ နာရီအတွင်းဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီအဆိုကို ဆေးပညာရှင်များအားလုံးနီးပါးကလည်း လက်ခံထားကြပါတယ်။ ၁၁-၃ အတွင်း အနားမယူပဲ အလုပ်တစ်ခုခု လုပ်နေမယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေလိမ့်မယ်။ ချက်ချင်းမဟုတ်ပေမယ့် ရေရှည်မှာ ဆိုးဝါးလာစေနိုင်ပါတယ်။
အကြောင်းကတော့ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အဓိကအရေးကြီးဆုံး အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ အသည်းဟာ ၁၁-၃ အချိန်မှာ လူတို့စားသုံးထားတဲ့ အစားအစာများထဲမှ အဆိပ်အတောက်နဲ့ မလိုအပ်တဲ့အရာများကို စစ်ထုတ်ပေးနေရလို့ပါပဲ။
အသည်းရဲ့ အလုပ်လုပ်ချိန်လို့ ဆိုရင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။အဲဒီအချိန်အတွင်း ခန္ဓာကိုယ်ကို အနားပေးထားရပါတယ်။ အိပ်စက်အနားယူရပါတယ်။အနားမပေးရင် အသည်းရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုများကို ထိခိုက်လျှော့နည်းစေပြီး အသည်းကို တဖြေးဖြေး ပျက်စီးသွားစေပါတယ်။
အသည်းမကောင်းတော့ရင် ခန္ဓာကိုယ်ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များ ပုံမှန်မလည်ပတ်နိုင်တော့ပဲ စက်ပစ္စည်းတစ်ခုခုမှာ မူလီတစ်ခု ချွတ်ယွင်းရင် ကျန်တဲ့အစိတ်အပိုင်းများလည်း အဆင်မပြေနိုင်တော့သလို လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်း အသည်းက အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ရင် အသည်းရောင်အသားဝါ B ပိုး၊ C ပိုး၊ စတဲ့ အသည်းရောဂါများအပြင် အခြားရောဂါများလည်း တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဖြစ်စေပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကျန်းမာရေးစောက်ရှောက်မှု မြင့်မားတဲ့ အချို့နိုင်ငံတွေမှာ ညဖက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့ ၀န်ထမ်းများကို ရေရှည်မလုပ်စေပဲ အလှည့်ကျ လှဲလယ်ပေးတတ်ကြပါတယ်။
အခုခေတ်မှာ ဖေ့စ်ဘုတ်ဟာ အိပ်ချိန်ကို အဓိက ဖဲ့ယူနေတဲ့အရာဖြစ်နေတာကြောင့် အသက်ကိုဉာဏ်စောင့်ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ကိုယ့်အသက်ကို အသိဉာဏ်ဖြင့် ဂရုပြုနိုင်ကြစေရန် ကျန်းမာရေးဗဟုသုတအဖြစ် အသိပေးလိုက်ပါတယ်။
ဖေ့စ်ဘုတ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲ အခြား ဘာပဲလုပ်လုပ် အဲဒီအချိန်မှာ မအိပ်ရင် အသည်းရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ထိခိုက်စေပါတယ်။
လူသားအားလုံး ကျန်းမာစွာ အသက်ရှည်နိုင်ကြပါစေ။
မိမိမှာအချစ်ဆုံးလေးတွေရှိရင် အသဲလေးလို့ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ကြမှာပဲနော် ဘာလို့လဲဆိုရင် အသဲဆိုတာ အသက်တမျှချစ်မြတ်နိုးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပါပဲ…အဲလိုပဲခန္ခာကိုယ်အတွက်အသက်ရှင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းမှာလဲအသည်းကအရေးကြီးပြီး ခန္ခာကိုယ်မှာ ဒုတိယအကြီးဆုံးအင်္ဂါရပ်လေးတစ်ခုပါ…
တချို့ကညဘက်ချစ်သူအသဲလေးနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမိမိအသည်းလေးကိုမေ့နေကြတယ်လေ ခန္ခာကိုယ်မှာည ၁၁နာရီနောက်ပိုင်းဆိုအသည်းအလုပ်လုပ်ချိန်မလို့အဲဒီအချိန်မအိပ်တဲ့သူတွေဟာအသည်း အဆီဖုံးတာတို့အသဲကြီးတာတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်…
အရက်သောက်မှအသည်းခြောက်တာမဟုတ်ပါဖူး…ထမင်းကြော်.အချိုရည်.အသားကင်..စတာတွေအလွန်အကျွံစားခြင်းညဘက်အိပ်စက်နားယူမှုမရှိခြင်းတွေကလဲအသည်းရောဂါကိုဖြစ်စေပြီးအသည်းရောဂါလက္ခဏာအများစုဟာ အဆင့်၂ အဆင့်၃ လောက်မှ လက္ခဏာပြတာမလို့ ဆေးကုသဖို့နောက်ကျသွားနိုင်ပါတယ်…
Credit to Original
ညအိပျယာထဲ အထိ အှနျလိုငျးသုံးရငျ ဘယျလောကျ ကွောကျစရာကောငျးလဲဆိုတာ ဖတျ​ ဖွဈအောငျ ဖတျသှားကွပါ
ကနျြးမာရေးပါရဂူကွီးမြားရဲ့ လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြအရ လူသားတှအေတှကျ အကောငျးဆုံး အိပျစကျအနားယူခြိနျဟာ ည ၁၁ နာရီမှ မနကျ ၃ နာရီအတှငျးဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
ဒီအဆိုကို ဆေးပညာရှငျမြားအားလုံးနီးပါးကလညျး လကျခံထားကွပါတယျ။ ၁၁-၃ အတှငျး အနားမယူပဲ အလုပျတဈခုခု လုပျနမေယျဆိုရငျ ကနြျးမာရေးကို ထိခိုကျစလေိမျ့မယျ။ ခကျြခငျြးမဟုတျပမေယျ့ ရရှေညျမှာ ဆိုးဝါးလာစနေိုငျပါတယျ။
အကွောငျးကတော့ လူ့ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ အဓိကအရေးကွီးဆုံး အလုပျလုပျပေးနတေဲ့ အသညျးဟာ ၁၁-၃ အခြိနျမှာ လူတို့စားသုံးထားတဲ့ အစားအစာမြားထဲမှ အဆိပျအတောကျနဲ့ မလိုအပျတဲ့အရာမြားကို စဈထုတျပေးနရေလို့ပါပဲ။
အသညျးရဲ့ အလုပျလုပျခြိနျလို့ ဆိုရငျ ပိုမှနျပါလိမျ့မယျ။အဲဒီအခြိနျအတှငျး ခန်ဓာကိုယျကို အနားပေးထားရပါတယျ။ အိပျစကျအနားယူရပါတယျ။အနားမပေးရငျ အသညျးရဲ့ လုပျဆောငျမှုမြားကို ထိခိုကျလြှော့နညျးစပွေီး အသညျးကို တဖွေးဖွေး ပကျြစီးသှားစပေါတယျ။
အသညျးမကောငျးတော့ရငျ ခန်ဓာကိုယျဇီဝကမ်မဖွဈစဉျမြား ပုံမှနျမလညျပတျနိုငျတော့ပဲ စကျပစ်စညျးတဈခုခုမှာ မူလီတဈခု ခြှတျယှငျးရငျ ကနျြတဲ့အစိတျအပိုငျးမြားလညျး အဆငျမပွနေိုငျတော့သလို လူ့ခန်ဓာကိုယျမှာလညျး အသညျးက အလုပျမလုပျနိုငျတော့ရငျ အသညျးရောငျအသားဝါ B ပိုး၊ C ပိုး၊ စတဲ့ အသညျးရောဂါမြားအပွငျ အခွားရောဂါမြားလညျး တဈခုပွီးတဈခု ဖွဈစပေါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ ကနျြးမာရေးစောကျရှောကျမှု မွငျ့မားတဲ့ အခြို့နိုငျငံတှမှော ညဖကျအလုပျလုပျရတဲ့ ဝနျထမျးမြားကို ရရှေညျမလုပျစပေဲ အလှညျ့ကြ လှဲလယျပေးတတျကွပါတယျ။
အခုခတျေမှာ ဖစျေ့ဘုတျဟာ အိပျခြိနျကို အဓိက ဖဲ့ယူနတေဲ့အရာဖွဈနတောကွောငျ့ အသကျကိုဉာဏျစောငျ့ဆိုတဲ့ စကားအတိုငျး ကိုယျ့အသကျကို အသိဉာဏျဖွငျ့ ဂရုပွုနိုငျကွစရေနျ ကနျြးမာရေးဗဟုသုတအဖွဈ အသိပေးလိုကျပါတယျ။
ဖစျေ့ဘုတျတဈခုတညျးမဟုတျပဲ အခွား ဘာပဲလုပျလုပျ အဲဒီအခြိနျမှာ မအိပျရငျ အသညျးရဲ့ လုပျဆောငျခကျြမြားကို ထိခိုကျစပေါတယျ။
လူသားအားလုံး ကနျြးမာစှာ အသကျရှညျနိုငျကွပါစေ။
မိမိမှာအခဈြဆုံးလေးတှရှေိရငျ အသဲလေးလို့ခဈြစနိုးနဲ့ချေါကွမှာပဲနျော ဘာလို့လဲဆိုရငျ အသဲဆိုတာ အသကျတမြှခဈြမွတျနိုးတယျဆိုတဲ့အဓိပ်ပါယျပါပဲ…အဲလိုပဲခန်ခာကိုယျအတှကျအသကျရှငျမှုဆိုငျရာလုပျငနျးမှာလဲအသညျးကအရေးကွီးပွီး ခန်ခာကိုယျမှာ ဒုတိယအကွီးဆုံးအင်ျဂါရပျလေးတဈခုပါ…
တခြို့ကညဘကျခဈြသူအသဲလေးနဲ့စကားပွောတဲ့အခါမိမိအသညျးလေးကိုမနေ့ကွေတယျလေ ခန်ခာကိုယျမှာည ၁၁နာရီနောကျပိုငျးဆိုအသညျးအလုပျလုပျခြိနျမလို့အဲဒီအခြိနျမအိပျတဲ့သူတှဟောအသညျး အဆီဖုံးတာတို့အသဲကွီးတာတို့ဖွဈတတျပါတယျ…
အရကျသောကျမှအသညျးခွောကျတာမဟုတျပါဖူး… ထမငျးကွျော.အခြိုရညျ.အသားကငျ..စတာတှအေလှနျအကြှံစားခွငျးညဘကျအိပျစကျနားယူမှုမရှိခွငျးတှကေလဲအသညျးရောဂါကိုဖွဈစပွေီးအသညျးရောဂါလက်ခဏာအမြားစုဟာ အဆငျ့၂ အဆငျ့၃ လောကျမှ လက်ခဏာပွတာမလို့ ဆေးကုသဖို့နောကျကသြှားနိုငျပါတယျ…
တစ်ရက်ကို ၅မိနစ်လောက် အချိန်ပေးလိုက်ယုံနှင့် ခါးကို သွယ်လျလှပစေနိုင်မယ့်နည်းလမ်း
ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားသူ (၉၀ ) ရာခိုင်နှုန်းတွင်တွေ့ ရသော ရှေ့ပြေးလက္ခဏာများ
သက်ကြီးရွယ်အိုများ ထုံနာကျဉ်နာအတွက် ဆေးနည်း..။..
ဆီးချိုဘယ်လောက်တက်မလဲ ကြိုက်သလောက်သာတက် ဆေးရှိပြီ
သမီး ဆေးရုံတက်ချင်တယ် အသက်ရှင်ချင်တယ်.. သမီးလေးနာမည်က မဝေဆာပြည့်ဖြိုးဦး
နန်းမိုဟွမ်အား သက်ဆိုင်ရာဆွေမျိုးထံ အခမ်းအနားဖြင့် ပြန်လည်အပ်နှံ
ရန်ကုန်မှာ တက္ကစီယာဉ်​​မောင်း လည်​ပင်းအား၊ ဓားဖြင့်​လှီး၍ ကားလု
တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းနေအိမ် အမွေခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကိုဖြစ်သူ ဦးအောင်ဆန်းဦး တောင်းဆို
ဖုန်းတစ်လုံးကြောင့် ၁၀တန်းကျောင်းသား ၄ ယောက်သေဆုံး
တောင်ကြီး နည်းပညာ တက္ကသိုလ်က ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ တီထွင်ထားတဲ့ နေရောင်ခြည် …
တစ်ပတ်အတွင်း ချိန်ဆရန် သင်၏ကံ ဆရာ ဇင်ယော်နီ (၂၀၁၈ အောက်တိုဘာ …
ကိုးနဝင်းဘုရားမှာ အများနည်းတူ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပါဝင် ကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်နေတဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်ရဲ့ပုံရိပ်များ
ARCHIVES Select Month November 2018 (403) October 2018 (736) September 2018 (575) August 2018 (563) July 2018 (656) June 2018 (563) May 2018 (519) April 2018 (359) March 2018 (624) February 2018 (323) January 2018 (403) December 2017 (229) November 2017 (7) October 2017 (6)
TAWTHU provide celebrity, life style, breaking news, local news and international news. Articles are displayed in text, video and photos. Visitors can read news in articles type of categories in https://tawthu.com/ (example – News, Entertainment, Sport, Health, Celebrities, Media & Music….etc). Hope our visitors enjoy our website.
© 2018 TAWTHU. All Rights Reserved.